သငျ မသိနိုငျလောကျတဲ့ အမရေိကနျအင်ျဂလိပျ ဘနျးစကားမြား - Wall Street...
Home | ဘလော့ချ | သငျ မသိနိုငျလောကျတဲ့ အမရေိကနျအင်ျဂလိပျ ဘနျးစကားမြား
သငျ မသိနိုငျလောကျတဲ့ အမရေိကနျအင်ျဂလိပျ ဘနျးစကားမြား
Feb 27, 2018 &VerticalLine;
လူတော်တော်များများက ဘန်းစကားဆိုရင် မယဉ်ကျေးဘူး၊ ပုံစံကျပြောဆိုမှုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေ့စဉ်သုံးစကားတွေထဲမှာ ဘန်းစကားတွေရဲ့လူကြိုက်များရေပန်းစားမှုကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ငြင်းနိုင်မယ်မဟုတ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားလေ့လာသူတွေအတွက်ကတော့ သင့်လျော်တဲ့စကားစပ်ထဲမှာ ဗန်းစကားတွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုတာဟာ ပိုပြီး သဘာဝကျပြီး ခင်မင်ဖွယ်ရာ ဖြစ်စေပါတယ်။ အောက်ပါ အမေရိကန်အင်္ဂလိပ် ဘန်းစကား (၇) ခုကတော့ သင်သိဖို့လိုတဲ့စကားတွေပါ။
သင်ဟာ busted အဖမ်းခံရကိန်းရှိနေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အမှားအယွင်းတစ်ခုခုကို လုပ်ထားလို့တစ်စုံတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) ရဲက တွေ့မိသွားပြီး ပြဿနာကြုံနေရပြီလို့ ဆိုလိုတာပါ။
E.g. Stop selling those illegal products. You are going to get busted. (အဲ့ဒီ တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေ မရောင်းပါနဲ့။ သင်ဟာ အဖမ်းခံရကိန်းရှိတယ်။)
John is busted for stalking her Facebook page. (John ဟာ သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွခ်စာမျက်နှာကို စောင့် ကြည့်နေတာမိသွားတယ်။)
တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို looker လို့ခေါ်လိုက်ရင် ဝမ်းသာလိုက်ပါတော့။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ သင့်ကို ချီးမွမ်းနေတာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Looker ဆိုတာ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့သူကို ခေါ်တာပါ။
E.g. Our new neighbor isareal looker, don’t you think? (ငါတို့အိမ်နီးချင်းအသစ်ကတော့ တကယ်ကြည့်ကောင်းသူပဲ။ အဲ့ဒီလိုမထင်ဘူးလား။)
You are going to bealooker someday, I can tell. (တစ်နေ့နေ့တော့ ခင်ဗျားဟာ ကြည့်ကောင်းသူဖြစ်လာမှာပါ။ ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်။)
Rip off ဆိုတာ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ကျသင့်ငွေထပ်ပိုတောင်းတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အမြဲပဲ ဈေးနှုန်းကို အရင်မေးသင့်ပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ရိတ်တယ်လို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
E.g. I was ripped off in my last trip. They soldaT-shirt for 60 dollars! (ကျွန်တော် နောက်ဆုံးခရီးစဉ်ထွက်ဖြစ်တုန်းက ငွေတော်တော်ကုန်သွားတယ်။ သူတို့က တီရှပ်တစ်ထည်ကို ဒေါ်လာ ၆၀ နဲ့ ရောင်းခဲ့တယ်။)
This organization is ripping off our country. This is unacceptable! (ဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ ငါတို့ တိုင်းပြည်ကို ရိတ်နေတယ်။ လက်မခံနိုင်စရာပဲ။)
သင်ဟာ တစ်ခုခုကို စွဲလမ်းနေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်အားထက်သန်နေတာ (သို့) တချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင် စွဲလမ်းတွယ်တာနေတတ်တာကို ပြောတာပါ။ ဒီစကားလုံးမှာက အပြုသဘောရော အပျက်သဘောပါဆောင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတတ်ပါတယ်။
E.g. Elena is totally hooked on the new season of Game of Thrones. (Elena က Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို လုံးဝစွဲလမ်းနေတယ်။)
He got hooked on drugs at an early age. (သူဟာ ငယ်ငယ်ကလေးထဲက မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို စွဲလမ်းခဲ့တယ်။)
Geek မှာ အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Geek ဆိုတာ ကွန်ပြူတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပြီး၊ လူတွေကို စကားမပြောချင်ပြောရမှာ မုန်းတဲ့သူမျိုးကို ခေါ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Geek ဆိုတာ နည်းပညာနယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်သူလို့လည်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
E.g. First I thought Alex wasageek who loved online games, but he actually has good sense of humor. (ပထမ ကျွန်တော်က Alex ကို အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကိုပဲ သဘောကျပြီး လူတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးမနေတတ်ဘူးလို့ထင်တာ။ တကယ်တော့ သူက ပျော်တတ်ပြီး ခင်စရာကောင်းတယ်။)
It’s time we needadata geek who could draw valuable insights for the next project. (အခုအချိန်က နောက်လာမယ့် ပရောဂျက်အတွက် တန်ဖိုးကြီးတဲ့အမြင်တွေပေးနိုင်တဲ့ ဒေတာဆရာ (data geek) တစ်ယောက်တော့ လိုအပ်နေပြီ။)
တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြိတ်ချစ်မိတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီလူကို နှစ်သက်စွဲမက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးကို ငယ်သူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုဖေါ်ပြရာမှာ အများအားဖြင့်သုံးတတ်ကြပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူတွေရဲ့ခံစားမှုတွေကို ဖေါ်ပြရာမှာတော့ သုံးလေ့မရှိပါ။
E.g. I think I haveacrush on Sam. He’s so funny and handsome! (ကျွန်မတော့ Sam ကို ကြိုက်နေပြီထင်တယ်။ သူဟာ အရမ်းဟာသပြောတက်ပြီး ချောလည်းချောတယ်။)
Back in the university, both Mickey and Tom hadacrush on that Australian girl. (တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက Mickey နဲ့ Tom တို့ဟာ အဲ့ဒီဩစတေးလျကောင်မလေးကို ကြိတ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်။)
ဒီစကားစု to be amped up “မြောက်တက်နေတယ်” ဆိုတာက သင့်အနေနဲ့ တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်လို့ အလွန်အမင်း စိတ်လှုပ်ရှားနေချိန်၊ သို့မဟုတ် အလွန်တက်ကြွနေချိန်မျိုးတွေမှာ ဖေါ်ပြဖို့သုံးတဲ့ ပြည့်စုံတဲ့စကားစုပါပဲ။
E.g. The amped-up crowd nearly went crazy as Alan Walker appeared on the stage. ( Alan Walker စင်ပေါ်တက်လာတော့ တက်ကြွနေတဲ့ပရိသတ်လူအုပ်ကြီးဟာ ရူးသွပ်လုနီးပါးကို
We will go skiing this Saturday. I am all amped up. (ကျွန်တော်တို့ ဒီစနေနေ့ကျရင် နှင်းလျှောစီးကြမယ်။ ကျွန်တော်တော့ တက်ကြွလွန်းနေပြီ။)